Myanmar News & Society - Home | Facebook
See more of Myanmar News & Society on Facebook
12,327 people like this
Contact Myanmar News & Society on Messenger
Thit Htoo Lwin - Celebrity
Myanmar Society of Medical Radiation Technologists Corner
Myanmar News & Society shared BBC Burmese's post.
BBC Burmese sharedalink.
ဖမ်းဆီးထားသူ ရာနဲ့ချီ ရှိနေသေး
Myanmar News & Society
သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် - - - >>> http://news-eleven.com/news/39824
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ မိလ္လာပိုက်လိုင်းများနှင့် ရေပိုက်လိုင်းများ ဆက်စပ်နေမှုကြောင့် မစင
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ မိလ္လာပိုက်လိုင်းများနှင့် ရေပိုက်လိုင်းများ ဆက်စပ်နေမှုကြောင့် မစင်များဝင်ရောက်မှုရ.....
Myanmar News & Society shared Eleven Broadcasting's live video.
Posted by Eleven Broadcasting
Eleven Broadcasting was live.
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း သတင်းအစီအစဉ် (နံနက် ၇ နာရီခွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)
■ ၀န်ကြီးဌာနများက ဘတ်ဂျက်တောင်းခံရာတွင် လုပ်ငန်းတွင်လိုအပ်သည့် အရေအတွက်ထက...် ပိုတောင်းကြပြီး မရရင်အရင်း၊ ရရင်အမြတ်ဟု သဘောထား၍ တင်ပြတောင်းဆိုနေကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆွေးနွေး
■ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာ သဘောထားအမြင် အညွှန်းကိန်း (CPI) တွင် မြန်မာနိုင်ငံက ရမှတ် ၃၀ ဖြင့် အဆင့် ၁၃၀ တွင်ရပ်တည်
■ ဒီမိုကရေစီလွှတ်တော်အနေဖြင့် ငြိမ်းစုစီဥပဒေသစ်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဒေါ်ညိုညိုသင်း ပြောကြား
■ မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အတွင်းရှိ အေဘယ်ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့
■ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းအပါအ၀င် အခြားအဝေးပြေးလမ်း ၂ လမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ADB မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၄၀ နှင့် AIF မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ချေးယူမည်ဟု လွှတ်တော်သို့တင်ပြ
■ မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုဖြင့် ဂျာမနီနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား အမျိုးသားနှစ်ဦး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရ
■ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော် ပိတ်ပွဲအတွက် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို မြောက်ကိုရီးယား ထပ်မံစေလွှတ်ရန်ရှိနေ
■ ရုရှားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နေဗယ်လ်နီ မော်စကိုမြို့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် အချိန်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လွတ်မြောက်လာ
■ အာဆင်နယ်၊ အက်သလက်တီကို၊ အေစီမီလန်၊ ဒေါ့မွန်၊ လိုက်ပ်ဇစ်တို့ ယူရိုပါလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့်သို့ တက်ရောက်
Myanmar News & Society shared Eleven Broadcasting's video.
အာဆင်နယ်၊ အက်သလက်တီကို၊ အေစီမီလန်၊ ဒေါ့မွန်၊ လိုက်ပ်ဇစ်တို့ ယူရိုပါလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့်သို့ တက်ရောက် (ရုပ်သံ)
ယူရိုပါလိဂ် ၃၂ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွေကို ယှဉ်...ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ နာမည်ကြီး အသင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်၊ ဒေါ့မွန်၊ အေစီမီလန်၊ အက်သလက်တီကိုနဲ့ လိုက်ပ်ဇစ်တို့ဟာ နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လယ်ခင်း သတင်းအစီအစဉ် (နေ့လယ် ၁ နာရီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု)
■ မော်လမြိုင်မြို့၊ ဘားအံမြို့နှင့် မြဝတီမြို့ ရေပေးဝေရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင...်းနှင့် အမှိုက်သိမ်းစနစ်တို့အတွက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၈၀ ချေးယူရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြ
■ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသ ပြည်သူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် စီမံကိန်းအသစ်အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီက ဒေါ်လာ ၄၈သန်း သုံးစွဲမည်
■ အထက်မြန်မာပြည် ပြည်တွင်း ဘုရားဖူးနှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ အသင်း ၉ သင်းနှင့် မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်းတို့ ခရီးသွားအာမခံ နှစ်ဖက်သဘောတူ နားလည်မှု စာချုပ် MOU လက်မှတ်ရေးထိုး
■ မုံရွာသင်္ကြန်ကို ချင်းတွင်းမြစ်၏ သဲသောင်ပြင်တွင် ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ချင်းတွင်းသင်္ကြန်ဟု အမည်ပေးသွားမည်
■ မန္တလေးတွင် ပထမဆုံးဆင်ပြတိုက်နင့် ဒုတိယမြောက် အပန်းဖြေဆင်စခန်းကို မတ်လအကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်
■ မင်းသားဟယ်ရီတို့ စုံတွဲထံ အဖြူရောင်အမှုန့်များ ထည့်ထားသည့် လူမျိုးရေးဝါဒီ စာတစ်စောင် ပေးပို့မှုဖြစ်ပွား
■ ဗင်နီဇွဲလားရှိ တိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ရုံတွင် ချည့်နဲ့နေသည့် တိရစ္ဆာန်များကို သုတ်သင်ပြီး အခြားတိရစ္ဆာန်များကို ပြန်ကျွေးရန် စီစဉ်နေ
■ အမေရိကတိုက်၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အရိုးစုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် မက္ကဆီကို ရေအောက်ဥမင်၏ ပုံစံတူကို သိပ္ပံပညာရှင်များ ဖန်တီး
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းကာလအတွင်း လမ်းတစ်ခြမ်းပိတ်စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမှုကြောင့် ရထားစီးနင်းသူများ အခက်ကြုံ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းကာလအတွင်း အစုန်/အဆန် လမ်းပိုင်းတစ်ခုစီအား သတ်မှတ်ကာလအလိုက် အလိုအလျောက် လမ်းပိုင်းအချက်ပြစနစ်အား ရပ်ဆိုင်းပြီး တစ်စင်းတည်းသွား လမ်းပိုင်းစနစ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြေးဆွဲမှုကြောင့် ရထားစီးနင်းသူခရီးသည်များ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့ရကြောင်း ခရီးသည်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
သတင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် - - - >>> http://news-eleven.com/news/39793
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းကာလအတွင်း လမ်းတစ်ခြမ်းပိတ်စနစ်ဖြင့်
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းကာလအတွင်း အစုန်/အဆန် လမ်းပိုင်းတစ်ခုစီအား သတ်မှတ်ကာလအလ...
Myanmar News & Society shared KBZ BANK's post.
Exchange Rates (23 February 2018, 11:40 AM).
Exchange Rates with reference to Central Bank of Myanmar ( 23 , February 2018, 11:40 AM).
Myanmar News & Society sharedalink.
မောင်တောမြို့နယ် ဂေါ်ဒူသာရကမ်းခြေ၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားနှစ်ဦး အပါအဝင် လူငါးဦးအား လု
အုတ်ဖုတ်ရန်အတွက် ထန်းပင်များကို ထင်းအဖြစ်အသုံးများလာ
ဘားအံမြို့၌ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ဆရာဝန် ၁ ဦးသေ၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
Myanmar News & Society shared Eleven Media Group's post.
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုမှ တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင်မှာ အသတ်ခံရပြီဟု ယူဆကြောင်း အင်းစိန်အောင်စိုးက ပြောကြားခဲ့ပြီး အမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ တရားစွဲခံထားရသူ အောင်ဝင်းထွန်း အာ...မခံရ
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုမှ တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင်မှာ အသတ်ခံရပြီဟု ယူဆကြောင်းကို အင်းစိန်အောင်စိုးက တရားရုံးသို့ သက်သေအဖြစ် ထွက်ဆိုပြီးနောက် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် အင်းစိန်အောင်စိုးက ဖြေကြားသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် --->>> http://news-eleven.com/news/39717